Frozen ကီးဘုတ်ရောင်စုံလန်းလန်းလေးနော် ~ မိုးညိုသား
1:41 AM Android MM Keyboard No comments
ဒီနေ့ကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်းထားလို့ Frozen ကီးဘုတ်လေးကို
နှိပ့်ပေးကျပါဦးနော်..အပန်းမကြီးပါဘူး ကျနော့်ကိုပြန်လည်ကူညီပေးဖို့ မေတ္တာရပ့်ခံတာပါ..
Step-1.အောက်က >>ဒေါင်းရန်ကလစ်ပါ<< ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
Step-2. "5sec". စောင့်ပေးပါ။
Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။
>>>> Frozen ရောင်စုံ ဒေါင်းရန်ကလစ်ပါ <<<<